Nyistockholm.se waxa wada Centrum för samhällsorientering ee gobolka Stockholms.
Xarunta Centrum för samhällsorientering ayaa ah meel ay wadaagaan labaatan iyo toddoba kamuun oo gobolka iyo kamuunka Håbo ee gobolka Uppsala. Waxaanu isku xidhnaa oo aanu horumarinaa waxbarashada jiheynta bulshada ee dadka cusub ee degan shan iyo labaatankaa kamuun.
Kamuunadan soo socda ayaa ka mid ah wada shaqeynta:
Waxbarashada jiheynta bulshada waa koorso loogu talo galay qofka ku cusub Swiidhan oo raba inuu helo aqoon dheeraad ah oo ku sabsan taariikhda bulshada Swiidhishka, dimuquraadiyada iyo nidaamka. Koorsada waxa lagu bixiyaa luqada hooyo iyada oo uu dhererkeedu yahay 100 saacadoo, inta u dhaxeysa 4-9 todobaad.
Koorsadan waxaad helaysaa fursad aad dib ugu eegto khibradaada iyo sida aad uga qeyb qaadanayso bulshada Swiidhishka iyadoo laga wada hadlaayo, cashar la qaadanaayo ama tabobar la sameynaayo.